DAAWO: UEFA Oo Soo Bandhigtay Xusuusta Arin Cajiib Ah Oo La Xidhiidha Saddexleydii Uu Lionel Messi Ka Dhaliyay PSV Iyo Arin Hore Oo Si Layaableh Loogu Xidhay. - GOOL24.NET
September 24, 2018 Mahamoud Batalaale
Kubbada cagta caalamka ayaa wax badan ka qortay saddexleydii goolasha ahaa ee uu Lionel Messi ka dhaliyay kulankii PSV ee ay Barcelona ugu furtay tartanka UEFA Champions league laakiin xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA oo iyaguba wax badan ka qoray saddexdii gool ee uu Messi ku dhaliyay Camp Nou ayaa hadda dhinac kale oo cajiib ah ka eegay.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa dib u baadhay taariikhda kulamada UEFA Champions League waxayna soo heleen in saddexleydii uu Lionel Messi ka dhaliyay kooxda ree Holland ee PSV in ay ahayd mid kusoo beegantay isla waqti uu saddexley ka dhaliyay isla kooxda ree Holland ee Ajax oo waliba ku jirtay isla tartanka UEFA Champions League.
Muuqaalka saddexleydii uu Lionel Messi ka dhaliyay kooxda PSV ayaa la soo raaciyay muuqaalka saddexleydii uu Lionel Messi ka dhaliyay kooxda Ajax iyada oo ay ay arimahani dhaceen hal habeen iyo hal bil oo isku mid ah balse ay sanadaha oo kaliyi kala duwan yihiin.
Muuqaalka aad halkan hoose ka daawan karto waxaa la soo dhigay barta rasmiga ah ee UEFA Champions League ee uu xidhiidhka kubbada cagta Yurub leeyahay waxaana lagu soo qoray qoraal muujinaya sidii qariibka ahayd ee ay wax u dhaceen.
Waxaa sida aad qoraalka ka arki karto lagu sheegay in 18 September 2013 kii uu Lionel Messi saddexley ka dhaliyay kooxda ree Holland ee Ajax laakiin isla 18 September 2018 waxa uu Messi saddexley kale ka dhaliyay kooxda reer Holland ee PSV.
Halkan ka daawo labada muuqaal ee uu Lionel Messi min saddexleyda kaga dhaliyay kooxaha ree Holland ee taariikhda isku midka ah ee UEFA Champions League
Lionel Messi ayaa xili ciyaareedkan balan ku qaaday in uu muhiimada kowaad ka dhiganayo ku guulaysiga koobka UEFA Champions League kaas oo ay kooxdiisa Barcelona guul wayn ugu bilaabtay.